IGUCCI MANE: IBURRPRINT: UMBONISO BHANYABHANYA 3-D / URHULUMENTE NGOKUCHASENE NOPHONONONGO LWEALBHAMU KARADRIC DAVIS - IINDABA
Uburprint: Umboniso bhanyabhanya 3-D
Ukuqhekeka okukhulu komhlaba ongaphantsi komhlaba ngo-2008-09 ekugqibeleni kukhupha iilebhile ezinkulu; kunye, jonga kweyona mixtapes yakhe yamva nje.
Ngo-Matshi 2009, umlobi weAtlanta uGucci Mane wafika ekhaya evela ejele emva kokusebenza iinyanga ezintandathu ngokuphula umthetho ngengqawule. Ke, ngo-Novemba, u-Gucci waphula umthetho kwakhona kwaye wabuyela ngqo entolongweni ngomnye unyaka wokubhida. Oko kuthetha ukuba uGucci wayenenyanga ezimalunga nesibhozo zenkululeko ngo-2009. Ngelo xesha wayesakwazi ukukhulula, ngokubala kwam, Ntandathu i-mixtapes (kubandakanya ezintathu-ngosuku-olunye Imfazwe ebandayo series) kunye ne-albhamu enye esemthethweni. Ubuye wafumana ixesha lokukhupha inani elingaqondakaliyo leendwendwe, iividiyo, kunye nemiboniso bhanyabhanya, wangcwaba ulwalamano olude kunye no-Young Jeezy, kwaye wenza iinkwenkwezi ezincinci kwiiproteni u-OJ Da Juiceman kunye ne-Waka Flocka Flame. Endleleni, waba ngoyena mntu wahlukanisayo kwi-rap, kunye negalari ye-peanut ye-intanethi emgceni ukuze ambize ngayo yonke into ukusuka kwi-grunter ecekeceke kumda ukuya kwithemba lokugqibela le-rap. Ukuba ulandele i-rap ngo-2009, wena ndinayo ukuba nembono ethile ngeGucci. Wayenonyaka.
Kwabangafundanga, iGucci yintengiso enzima. Umthamo opheleleyo wemveliso yakhe uthetha ukuba akukho ndawo yokungena. Uhambisa onke amazwi akhe kwi-monotone emarbled engqindilili kangangokuba amazwi akhe kunokuba nzima ukuwenza xa umamele kuqala. Akaze abalaselise iipunchline zakhe (okanye enye into, ngokwenene); bahamba nje. Uthanda uhlobo olunye olulula, lwe-monotonic yokubetha: isenzi, isproingy, into esekwe kwis synth ehlala ivakala nje ngexabiso eliphantsi . Uqhekeza indlela, indlela ngaphezulu kweemoto zakhe kunye nobucwebe kunayo nayiphi na enye into.
Ngokuhamba kwexesha, nangona kunjalo, loo matyala aba ngamandla. Ngenxa yokuba ezixhamla iipunchline zakhe nzima kakhulu, kuya kufuneka umamele ngakumbi kwaye rhoqo ukukuva. Kwaye kuyanceda ukuba iipunchline zakhe zihlale zihlekisa kwaye zintsokothile: 'Popping Cris, cinga ukuba ndifuna utywala engaziwa / 45 kwiklabhu, ndingayibulala imvubu.' Ubomi bakhe bokugqibela bulungele 'ukulinda, ngaba wayitsho nyani loo nto?' iimpendulo. Nokuba unikezelo lokwenyani kunqabile ukuba lwahluka, unenani elingenasiphelo lokuhamba kokwenyani; Uhlasela ukubetha ngokwahlukileyo kwindinyana nganye, ebeka inflections kunye nokumisa kwiindawo ezingalindelekanga kwaye uhlala efumana ipokotho yokubetha. Ukugxila kwakhe okungapheliyo kwizinto eziphathekayo eziphathekayo kunqabile ukuba zibekwe kwi-rankings kuba ulunge xa ​​edlwengula malunga nezinto kunokuba nje nabani na. Zombini ii-monochromatic beats zakhe kunye nemveliso yakhe emangazayo zinika umsebenzi wakhe umbono wokuntywiliselwa, ukubetha inqaku elifanayo kaninzi kunye neziphumo ezanelisayo- njengokutya imini yonke yokugula kwiifilimu zikaJames Bond.
Kwaye ngeGucci, kukwakho nemvo yamava ekwabelwana ngawo. Abantu banjalo ukumamela kulo mfo; Akalilo elinye nje ilizwi kwigumbi le-intanethi. Uye wanyukela kuhlobo oluthile lwenkcubeko yenkolo ngexesha apho iinkwenkwezi ze-rap akufuneki zibekho kwakhona. Ufumene abaphulaphuli bakhe ngokunyusa ukungazi kubuchwephesha bobuchwephesha, ngokwenza ke ukuba u-2009 abe yindlalifa efanelekileyo kwi-Cam'ron's 2004 okanye kwi-Lil Wayne's 2005. Ebekwisandi esibi kakhulu.
Intsebenziswano ka-Okthobha uDrama Umboniso bhanyabhanya 3D: The Ishicilelo seBurrprint ihlala iyeyona inkulu kwiimixapes zikaGucci zika-2009, ngokuyinxenye kuba ngowona mzekelo usulungekileyo wobuhle bakhe. Le yindlu yamavili ye-Gucci: iziyobisi- kunye nemali-ethetha ngokulula, i-eerie Casio ibetha ngaphandle kwemizamo ye-crossover kwaye phantse akukho ndawo yeendwendwe ezivela kubavakalisi ngaphandle kwenkampu esondeleyo yeGucci. Ukuziqhayisa kukaGucci kunye nokubeka ezantsi kuyadlala kodwa kubalulekile kuyo yonke le nto: 'Awunguye umnini wale moto ebolekayo / ndinemfumba yemali emide njengoko ubangela oko kungumbono wam.' Kwanaxa echaza izindlu ezichanekileyo ngokweenkcukacha, uqhubeka exoxa iziqhulo kunye nokwenza izikweko. Kukho ingoma enye yokulahla amaqela amabi kunye nenye malunga nokuba kufuneka axhomane nesithunzi sakhe kuba ukude kunaye wonke umntu. Amalungu okungahambelani kwakhe kwe-1017 yeBrick Squad basebenze zonke izikhonkwane kwiivesi zabo kwi-trio of posse cuts.
ingoma entsha yentlungu
Kodwa eyona asethi inkulu ye-mixtape inokuba bubuhle bokuncoma. Ukuhanjiswa kukaGucci kunengoma eqhelekileyo yokuvuma iingoma ongasoze uyibone isiza, kwaye iziphumo zithetha ukuba phantse yonke ikwayari ayilibaleki- into engacingekiyo phantse kuyo nayiphi na enye rap. Kwaye kuba uGucci phantse akaze adlwengule ngaphezulu kokubetha kwabanye abantu, oko kuthetha ukuba ufumana iyure epheleleyo iingoma , into engakhange inikezwe nguCam noWayne ngexesha labo lokubaleka.
Ungacinga ukuba indlebe yendalo yamahhuku iya kumqinisekisa uWarner, ilebheli kaGucci, ukuba imyeke enze into yakhe engacacanga kwi-albhamu esemthethweni, Urhulumente Vs. Radric UDavis . Kodwa khokela 'ukuKhanya' okungatshatanga, intsebenzo yethoni engeva nge-Usher egcina kanye into eyenza uGucci athandwe; abantu babenentshabalalo ngaphambi kokuba i-albhamu iphume. Kakhulu, nangona kunjalo, i-LP yenza umsebenzi olungileyo wokugcina indawo yokuthengisa i-Gucci yenqaku elifanelekileyo kwinqanaba elikhulu. Abaququzeleli abaqhelekileyo uZaytoven noFatboi bajika ii-beats nganye nganye, kwaye uninzi lwezinye iingoma, ezivela kubavelisi bamagama abanjengoJazze Pha kunye noScott Storch, zivakala kakhulu njengeeZaytoven beats. Iindwendwe ezinamagama amakhulu njengoWayne noCam bazisa imidlalo yabo ye-A kuba bayazi ukuba bajongana nomrhwebi kwinqanaba labo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu, uGucci ugcina ubuqaqawuli bakhe bodwa. Uhlala efumana iindlela ezingalindelekanga zokuthetha into enye: 'Ndiyi runnin' gunnin 'stunnin' kunye nekhulu lababulali wenydini '/ Kwaye u snitchin' bitchin 'tattle tellin' kwaye woyika ukuma mzantsiweb mna. ' Uthi ezinye izinto ezingenangqondo: 'Yitya abavakalisi abafana noJeffrey Dahmer / umbala weDope uSinead O'Connor.' Unengoma enye enxibe yonke into etyheli-enye nenye apho i-crooner yeendwendwe uBobby Valentino inikezela ngokukufaka phambi kukayihlo. Uhlabelela i-chorus ye-Amy Winehouse 'Rehab' phakathi kwevesi. Kukho iindlela ezimbalwa eziphosakeleyo, ezinje ngokuqhutywa kweengoma ze-R & B phakathi kwe-albhamu ezisa isantya. Kodwa i-LP inamandla anqabileyo kwimizamo yelebhu enkulu. NjengoWayne UCarter II , iguqulela uloyiso lukaGucci's mixtape lube yinto enokwetyisa kwaye ikhawuleze.
Ewe, i-albhamu yaphuma xa uGucci ebuyile ejele kwaye wathengisa iindlela ezimbalwa kunokuba bekulindelwe. Abagxeki bakaGucci bathabathe ithuba lokuxela ubume bendawo yakhe njengenkohliso enkulu. Abo baphikisi kufuneka bathathe okuhle, baphulaphule ngengomculo kwingoma ye-albhamu yokugqibela 'Utshaba olubi kakhulu' - umzuzwana onqabileyo apho uGucci andisa into efana nesebe lomnquma kuJeezy kwaye axoxe ngokungathandabuzekiyo ngokuzilimaza, konke ngaphandle kokuphazamisa ubukhulu bakhe , ngokungxolayo hopscotching ingqiqo yamagama. Ke: xa eziva ethanda njalo, uGucci angathetha malunga nemeko enzulu ngesifaniso esosulelayo asisebenzisayo ukubiza i-jeweler yakho ukuba ilahlekile. Ngokobugcisa, ubuncinci, uyaqala nje. Kwaye ngoku ukuba uza kuvalelwa okwethutyana, ilizwe linethuba lokufumana.
uncumo katy perry
isithunzela sigcwele ngasentshona
Grammys 2016 taylor ukusebenza ngokukhawuleza
ukusuka kukumkani ukuya kuthixo
izithethi ezilungileyo zebluetooth